Sidee Jawaab La'aan Bulsheed u Dhaawaceysaa Ganacsigaaga | Martech Zone
Monday, August 3, 2015 Sabti, Agoosto 1, 2015 Douglas Karr
Waxaan horay uqiyaastay saamaynta ganacsi ee adeegga macaamiisha oo liita marka loo eego warbaahinta bulshada. Ka waran si fudud oo looga jawaabo? Ma ogtahay in 7 ka mid ah 8 farriimood ee bulsheed ee loogu talagalay noocyada aan laga jawaabin 72 saacadood gudahood? Isku soo wada duuboo iyadoo ay jirto xaqiiqda ah in 21% ay kordheen farriimaha loo dirayo noocyada adduunka (18% gudaha Mareykanka) oo aan dhibaato dhab ah ku qabno gacmaheena.
In ugu dambeeyay Tusmo Bulsheedka Biqlay, Waxay xisaabiyeen in boqolkiiba 40 farriimaha u baahan yihiin jawaab. Mana aha wax la yaab leh, boqolkiiba 40 macaamiisha ayaa ka taga sumad sababo la xiriira adeegga macaamiisha oo liita. Dhinaca gadaalna, magacyada macaamiisha kula macaamilaya warbaahinta bulshada waxay kasbadaan celcelis ahaan 33 dhibco iyaga ka sarreeya Dhibcaha Bixiyeyaasha Net.
Tusmada Bulshada ee 'Sprout Social Index' waa warbixin ay soo diyaarisay soona saartay Sprout Social. Dhammaan xogta la tixraacay waxay ku saleysan yihiin astaamaha bulshada ee 97K (52K Facebook, 45K Twitter) ee akoonnada joogtada ah ee firfircoon inta u dhexeysa Q2 2014 iyo Q2 2015. In ka badan 200 milyan oo farriimo la soo diray xilligaa ayaa lagu lafa guray ujeeddooyinka warbixintan. Qaar ka mid ah xogta Q1 2013 ilaa Q4 2013 ayaa laga yaabaa inay ka wareegeen warbixintii ugu dambeysay ee 'Sprout Social Index' sababtoo ah isbeddelka ku yimid astaamaha bulsheed ee la falanqeeyay; si kastaba ha noqotee, dhammaan isbeddellada isdaba jooga ahi waxay ahaanayaan kuwo joogto ah.
Talada 'Sprout Social' ee ku wajahan arrintan ayaa loogu talagalay noocyada inay ku dhex milmaan kooda maareynta warbaahinta bulshada la a madal adeegga macaamiisha si kooxahaagu ay ugu xilsaaraan howlaha si sax ah dadka saxda ahna ay ka jawaabaan. Tani waxay xaqiijineysaa in cusbooneysiinta warbaahinta bulshada ee ku wajahan noocyada ay bilaabaan codsi adeeg macmiil oo loo qoondeeyay wakiil gaar ah oo macaamiisha ah.
Taladayda dheeriga ah waxay noqon doontaa in la hubiyo in qof kasta oo uga jawaabaya arrimaha bulshada la siiyay awood ay ku hubiso in arrimaha si dhakhso ah oo guul leh lagu xalliyo. Khatar ugama dhigi kartid dib udhaca jawaabta fagaaraha dadweynaha oo leh nidaam ubaahan in tikidhada dib loo qoondeeyo loona gudbiyo sixitaanka.
Tags: jawaabta adeegga macaamiishadaryeelka macaamiisha bulshadaadeegga macaamiisha bulshadajawaabta warbaahinta bulshadawaqtiga jawaabta warbaahinta bulshadabulsheed
Suuq-geynta Cimilada iyo Sababta Faa’iidadu ugu xirnaan karto